Ngabe ukugoduka kukaMlangeni kushiye iqembu linqunu? - Bayede News
Home » Ngabe ukugoduka kukaMlangeni kushiye iqembu linqunu?
Ngabe ukugoduka kukaMlangeni kushiye iqembu linqunu?
Izinsolo zenkohlakalo ethinta ukhuvethe zingase zibe yinxeba lokugcina elingajuqa uKhongolose
Bambalwa abangaliphika igalelo le-African National Congress (ANC) emzabalazweni waboHlanga kuleli. Futhi akuyona imfihlo ukuthi abaholi bale nhlangano bagqama kakhulu. Nokho elinye iqiniso elingephikiswe elokuthi leli qembu selaphenduka uteku lwabezindaba, abahlaziyi nomphakathi jikelele.
Lokhu kudalwa yisithombe esesize sayifanela le nhlangano nokuyisithombe sabantu neqembu elinenkohlakalo. Lokhu kuyishwa. Nokho okuyishwa kakhulu yindlela amanye amalungu nabaholi bale nhlangano abaziphatha ngayo.
Sekwaba umkhuba owamukelekile kumalungu nakubaholi baleli qembu ukuthi bakhulume ngenkohlakalo, empeleni bonke basuke beyigxeka. Inkinga lapha wukuthi abanye abaholi namalungu aleli qembu basuke begqoke isikhumba semvu. Okuqaphelekayo wukuthi okusuke kumqoka kuwo wukududula nokugxeka inkohlakalo kulabo abangazwani nabo. Ngamafuphi umuntu usuke ephawula ngoba enenhloso yokujivaza imbangi yakhe, hhayi ngoba ebona ukweba lokho kuyinto embi.
Kuthangi lokhu imilomo ibivunana ngokugwamandwa kwamandla ombuso. Ekhona namagama alunjaniswa nalokho. Sonke sithe uma sizwa ukuthi kanti kunabantu abanesibindi sokukhuluma ngezinsolo zenkohlakalao nenkohlakalo qobo kwathi gidi. Nokho ukudumala kuqala manje lapho sekwenzeka okucishe kufane nokugwamandwa kombuso kepha kukhonjwa kubantu abehlukile. Esikhundleni sokuthi kube nokuphawula, ukusola nokubabaza imikhuba kuba nokunkwankwaza nokuchaza okungaqondakali. Empeleni kwabanye kubukeka amathe ebuyela kwasifuba.
Ngalesi sikhathi izaba eziqhamuka kubantu kubandakanya nongoti nabezindaba kuyamangalisa. Kusho khona ukuthi abantu lapha kuKhongolose into abathi wubugebengu kuba yibona uma kwenziwa ngabanye. Ukugagaza kwabathile uma okwabe kukhonjwa kubabusi baphambili sekukhonjwa kubabusi banamuhla.
Kuleli sonto leli qembu belilondoloza omunye walo, ubaba uMlangeni. Ngaphakathi nangaphandle kweqembu kukhona ukuvumelana ukuthi kuMlangeni bekunendoda, indoda engakholelwa ekwebeni neyabe ithi lokho kuwukubukela phansi umzabalazo waboHlanga. Okusobala wukuthi ukuhamba kukaMlangeni kushiya le nhlangano inqunu. Ifihlwa nje le nsizwa endala kuthaphuka umsanka nothinta imali yamathenda kwezempilo eGauteng, KwaZulu-Natal naseMpuma Koloni. Lokhu kuphoqe ukuthi loyo onguMkhulumeli kaMengameli uNks uKhusela Diko athathe akubize ngekhefu lesikhashana. Kukhona abathi leli khefu lakhelwe ukuvikela isithunzi sikaMengameli nasondele kakhulu kuye.
Isiqhwaga sinkonkoshela amankwahla kube mnyama izoco
KwaZulu-Natal nakhona ziyanephulana emuva kokuvela kwemibiko emibili engenkohlakalo. Owokuqala ukhishwe nguNdunankulu nothinta izinto eziphathelene nokuvikela ukhuvethe. Khona lapho uMnyango Wezemfundo nawo wethule umbiko oshaqisayo ngamaqabelo. Kanti eMpuma Koloni udaba lombembeshwane nalo luza kabi.
Yize kade zikhulunywa izindaba zenkohlakalo ngaphakathi nangaphandle kwaleli qembu, okusobala kulokhu wukuthi inkohlakalo ethinta ukhuvethe ingahle ibe yinxeba lokugcina elingajuqa le nhlangano ngoba yenzeka futhi nemibiko ingahle ikhishwe ngesikhathi lapho izwe lizilungisela ukhetho. Kanti nesigcwagcwa sokwaziwa njengeqembu lamahalanjonjo, amasela adla imali yosizo ingahle imoshe isithunzi seqembu namalungu.
Ukuhamba kukaMlangeni kungahle kusho ukuncipha noma ukuphela kofakazi beqembu lombangazwe elingenachashazi. Khona lapho kungahle kusho ukuphela kwabantu abadala abangakhuza umhlola bakhombe namachilo ngoba kontanga usifumbu ubona uqhaqhazela nxa kufikwa emgolweni nasezinsolweni zenkohlakalo.
nguMfo wakwaNomajalimane Jul 31, 2020